आईफोनको ब्याट्री छिटो सकिएर दिक्क हुनुभयो ? ब्याट्री लाइफ बढाउने सजिलो उपायहरु यस्ता छन् - Thulo khabar
आईफोनको ब्याट्री छिटो सकिएर दिक्क हुनुभयो ? ब्याट्री लाइफ बढाउने सजिलो उपायहरु यस्ता छन्
आईफोन प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरूले प्रत्येक पटक एउटै समस्याको सामना गर्नुपर्दछ र त्यो भनेको आईफोनको छिटो सकिने ब्याट्री हो। यो सामान्य हो कि आईफोनको आयु बढ्दै जाँदा, आईफोनको ब्याट्रीको समस्याहरू बढ्छन्।
तर, यदि तपाईं एप्पल आईफोन प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ र तपाईं पनि तिब्रगतिमा ब्याट्री ड्रेनको समस्याबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। यसको लागि, हामी तपाईंलाई केहि त्यस्ता सुझावहरू बताउँदैछौं, जसबाट तपाईंले आफ्नो ब्याट्रीको आयु बढाउन सक्नुहुनेछ।
यसको लागि तपाईलाई कुनै पनि तेस्रो पक्षिय एप वा मोबाइल वर्कशपमा जानु पर्दैन। यी सुझावहरूले तपाईंको आईफोनको ब्याट्री आयु विस्तार गर्न मद्दत गर्दछ।
भाइब्रेसन मोड बन्द गर्नुहोस्
यदि तपाईं आफ्नो आईफोनमा राम्रो ब्याट्री लाइफ पाउन चाहनुहुन्छ भने, सधैं आफ्नो आईफोनलाई भाइब्रेसन मोडमा नराख्नुहोस्। भाइब्रेसन मोटरले पनि ब्याट्री प्रयोग गर्दछ। यो सन्देश पठाउँदा वा कल गर्दा प्रयोग गरिन्छ, तर जब तपाईं टाइप गर्दै हुनुहुन्छ, धेरै कीबोर्डले हेप्टिक फीडब्याक दिन्छ, जसको कारण ब्याट्री खपत बढ्न थाल्छ। यदि फोनमा भाइब्रेसन मोड आवश्यक छैन भने, यो फिचर बन्द गर्नुहोस्।
स्क्रीन ब्राइटनेस कम गर्नुहोस्
अहिलेको समयमा, आईफोन ठूलो स्क्रीनका साथ आउँछ। यस्तो अवस्थामा, यदि तपाई लो मोडमा ब्राइटनेस राख्नुहुन्छ भने, ब्याट्री कम खपत हुनेछ। यदि तपाईं डिस्प्लेको ब्राइटनेट कम गर्न चाहनुहुन्छ भने, पहिले सेटिंग्समा जानुहोस् र त्यसपछि एक्सेसिबिलिटीमा जानुहोस्। यस पछि, डिस्प्ले र टेक्स्ट साइजमा तपाईं यसलाई अटो ब्राइटनेसमा गएर समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ।
नोटिफिकेसनहरू बन्द राख्नुहोस्
यदि तपाईं कुनै सोसल मिडिया प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यसबेला तपाईं आईफोनको स्क्रीनमा उनीहरूको अपडेटहरू पाउनुहुनेछ। तर यी अपडेटहरूको कारण तपाईको फोनको ब्याट्री एकदम चाँडो खस्कन्छ। नोटिफिकेसनहरू बन्द गर्न, तपाईंले पहिले सेटिङ्गहरूमा जानुपर्नेछ, त्यसपछि नोटिफिकेसनहरूमा जानुहोस र यहाँ तपाईं यसलाई कस्टमाइज गरेर एपहरूले कसरी र कहिले नोटिफिकेसनहरू दिन्छन् भनेर मिलाउन सक्नुहुन्छ।
लोकेसन सर्भिस बन्द गर्नुहोस्
लोकेसन सेवा धेरै उपयोगी छ। तर, जब यो प्रयोगमा हुँदैन यसलाई बन्द राख्नु उत्तम हो। धेरै कम मानिसहरूलाई थाहा छ कि लोकेसन सेवाको कारण, ब्याट्री धेरै छिटो कम हुँदै जान्छ। यदि तपाई आफ्नो आईफोनमा लोकेसन सेवा बन्द गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले पहिले सेटिंग्समा जानु पर्छ, त्यसपछि प्राइभेसीमा, त्यसपछि लोकेसन सेवामा। त्यहाँ गएर तपाईं लोकेसन सेवा बन्द गर्न सक्नुहुनेछ।
ब्याकग्राउण्ड एप रिफ्रेसलाई अफ राख्नुहोस्
यदि तपाईं नयाँ आईफोन प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने स्मरणरहोस जब तपाईं आईओएस एप प्रयोग गर्नुहुन्छ, यसले ब्याकग्राउण्डमा पनि काम गरिरहन्छ। ब्याकग्राउण्ड एप रिफ्रेसको माध्यमबाट, यो ब्याकग्राउण्डले अद्यावधिकहरूको लागि जाँच गरिरहन्छ, जसले तपाईंको फोनको ब्याट्री चाँडै पनि सकिन्छ । यसलाई बन्द गर्न, पहिले तपाईंले सेटिंग्समा जानुपर्नेछ, त्यसपछि जनरलमा रहेको ब्याकग्राउण्ड एप रिफ्रेसमा जानुहोस्। यहाँ तपाईं अन-अफ ब्याकग्राउण्ड एप रिफ्रेस गर्न सक्नुहुन्छ।